मास्क नलगाएर बैंक जाँदै हुनुहुन्छ, फर्कनु पर्ला ! – Merokhushi
मास्क नलगाएर बैंक जाँदै हुनुहुन्छ, फर्कनु पर्ला !
मेरो खुसी । २४ चैत्र, २०७६ सोमबार १८:३७ मा प्रकाशित
सुतीको गम्छाले मुख छोपेका अध्यापक बालकृष्ण शर्मा । फोटो : मेरो खुसी
नेपालगन्ज : महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगन्जका नेपाली विषयका अध्यापक बालकृष्ण शर्मा सोमबार धम्बोझीस्थित नेपाल बैंक लिमिटेडमा सवा ११ बजेतिर चेक साँट्न गएका थिए । एक मिटरको दुरीमा एक घण्टा पालो पर्खेर भित्र प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेका उनलाई बैंकका गार्डले भित्रैबाट भने, ‘माक्स छैन भने भित्र प्रवेश गर्न पाउनुहुन्न ।’
उनले अनुभव सुनाए, ‘माक्स त लगाएको थिए । भीँडभाँडमा कपडाको पातलो माक्सले कोरोना संंक्रमण नरोक्ला भनेर सुतीको गम्छाले मुख छोपेको थिए । यसले माक्स ढाकियो । गार्डलाई माक्स नलगाएको भान भयो ।’
नेपालगन्जको धम्बोझीस्थित नेपाल बैंक लिमिटेडमा सेवाग्राहीको लाइन । फोटो : मेरो खुसी
उनी माक्स भएका कारण बैंकभित्र प्रवेश गर्न पाए । उनीभन्दा अघि दुई जना युवक लामो लाइन पार गरेर ढोकाभित्र पस्ने बेलामा माक्स नभएपछि फर्कनु परेको थियो । एक जनाले ठूलो रुमालले नाकमुख छोपेका थिए भने मधेसी समुदायका अर्का युवक रिसले फन्फनिँदै घर पुगेर माक्स लगाएर आएका थिए । एक जना अधबैंसे पुरुष माक्स नभएपछि बैंकको लाइनमा बसेर फर्केका थिए । उनी दौडदैं नजिकैका फार्मेसीमा माक्स किन्न गए । नपाएपछि भोलि आउँला भन्दै फर्किएका थिए । बैंकभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै गार्डले सेनिटाइजरले हात सफा गर्न लगाएका थिए भने बैंकभित्र पनि गोलो घेराभित्र राखिएको थियो । नेपाल बैंक लिमिटेड धम्बोझी शाखाले बैंकमा आउँदा माक्स अनिवार्य रुपमा लगाउन सूचना नै जारी गरेको छ ।